Inkonzo yoThutho lweMpahla ye-Intanethi 24X7X365 Iintsuku
Abapakisheli bendawo kunye nabahambisa iMumbai ukuya eBangalore
IiPaki ezigqwesileyo kunye nabahambisa iMumbai ukuya eChennai
Abapakisheli beNdawo kunye neMovers Mumbai ukuya eHyderabad 24x7x365 iintsuku ezikhoyo zokutshintsha ikhaya kunye neenkonzo zokufudusa iofisi
I-IBA ivunyiwe kwiPaki yeNdawo eBalaseleyo kunye neMovers Mumbai ukuya ePune
Zeziphi iintlobo ezahlukeneyo zeeNkonzo zoThutho lweSithuthi ezifumanekayo eIndiya, kwaye uchaze iiNzuzo zazo
iinkonzo zothutho lwempahla
Iilori zokuHawula izinto ezinzima
Iinkampani zokupakisha ezihambayo yeyona ndlela ilungileyo kubantu abafuna ukutshintsha iimveliso zendlu ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Ezi nkampani nazo...
Ngaba iiPaki eziziiNgcali kunye neeMovers ziNcedisa njani ukuFudukela kwiOfisi?
Iinkampani ezinceda abantu ngokupakisha iinkonzo ezihambayo ziya kuba neenkampani kwiindawo ezahlukeneyo kunye nezixeko ezifana ne-Chennai, i-Bangalore, i-Kolkata, ne-Mumbai. Okunye...
Sonke siyakwazi ukubaluleka kokupakishwa kwezindlu ezifikelelekayo kunye neenkonzo zokuhambisa. Ngumgangatho omhle ukuba uninzi lwabasebenzi besixeko sangaphandle kufuneka batshintshe izinto zabo ...
Kule nkulungwane yama-21, uninzi lwethu luqeshwe kumacandelo ahlukeneyo abucala. Imisebenzi enjalo ifuna ukutshintshwa ukusuka kwesinye isixeko ukuya kwesinye ukuze kube kufutshane ...
Iinkonzo zothutho lweenqwelo-mafutha zibalulekile ekushenxiseni iimpahla nemithwalo ukusuka kwindawo enye ukuya kwenye kwilizwe lonke. Iinkonzo zezithuthi ezirentwayo zidlala indima ebalulekileyo...
iinkonzo zothutho lwempahla293
iinkonzo zothutho lwempahla kufutshane nam216
uthutho lwempahla kunye neshishini lolungiselelo72
arhente yothutho lwempahla55
Iintlobo zezithuthi zorhwebo37
upapasho lweendaba zothutho33
Landela ku Instagram @heavyhaulagetrucks
Ngawaphi amashishini kunye namashishini anempembelelo eyodwa kuqoqosho lwehlabathi?
Ishishini elibonwa ngokukodwa kwindawo engqongileyo, amaphephandaba, imarike eqhelekileyo yile ilandelayo:-
Iinkampani zokucoca ioyile
Imizi mveliso yamandla
Imizi-mveliso yoMqhaphu yeMqhaphu
Imizi-mveliso yeZityalo zeswekile
Amashishini okwenziwa koKutya
Amashishini oMbane kunye ne-Elektroniki
I-Peb Pre-engineered building Industries
Amashishini eziseko zophuhliso
Iinkampani zeenqwelomoya kunye namashishini eenqwelomoya
I-Courier kunye nePasela Industries
Amatanki okugcina Industries
Imizi-mveliso ehambisa umhlaba
Iinkampani zetshokolethi yebhiskithi
iiPackers Movers Companies
Ngokwe-avareji, zingaphi iintlobo zelori zezithuthi ezithengiswayo ezikhoyo emhlabeni?
Uninzi lweelori zeenqwelo zorhwebo ezibonwayo kwihlabathi zimi ngolu hlobo lulandelayo
Ilori encinci (Tempo MCV)
I-ICV Truck Intermediate yentengiso isithuthi
Iilori ze-LPT (Iilori ze-Platform ezinde)
Ilori yeHMV (Imoto eNzima)
Vula Ilori yeQonga
Ilori yenkunkuma enobungozi
Izixube zekhonkrithi kwiBulker Truck
Ilori yokuthwala iimoto
IIndiya lilizwe laseDevbhoomi kunye noKumkani ozukileyo Bharat. Ngenxa yokuba ilula, ilula, ihambele phambili kwaye inempumelelo, kule minyaka iyi-1000 idlulileyo, abahlaseli abaninzi bamanye amazwe beze bayonakalisa ngobuqhetseba kwaye banyhasha inkcubeko kwaye banyanzelise ubuntu babo obude kuthi ngokuxelela impucuko yethu efanelekileyo ukuba ibe buthathaka. Ngenxa yoko, asazi isiHindi kwaye asiqondi isiUrdu asinakukwazi ukuthetha isiNgesi.
Yintoni ikhowudi yeposi yaseIndiya?
Ikhowudi yeposi ephuhliswe ngeposi yaseIndiya jonga ikhowudi yendawo yakho kunye nekhowudi yeposi:-https://www.indiapost.gov.in/VAS/Pages/findpincode.aspx
Mingaphi imilambo eIndiya ?
183 + Imilambo yaseIndiya Ijongwe ngu:- www.pincodeindia.net/list-of-rivers-in-india.php
Zingaphi izithili eIndiya ?
IZithili ezingama-718 zaseIndiya.
Leliphi elona lizwe likhulu eIndiya?
IRajasthan (342,239 sq km) lelona lizwe likhulu eIndiya ngokwendawo .
Yintoni pan India?
PAN India ? ngokusisiseko kuthetha uBukho kwiSizwe sonke. Ligama elibandakanya phantse yonke into esasazwayo okanye enxulumene neIndiya. Umzekelo, inokuba malunga neenkampani, amashishini, kunye nantoni na yesizwe.
Zingaphi iilori onazo zizonke?
Si Iilori ezili-5000 iqhagamshelwe ukusuka Izithili ezi-638 apho silayisha okanye sibuyisela umthwalo ovela ezidolophini, ezilalini, kwi-metro kunye nezona ndawo zikude ezinzima. Kunye nale nto, sibanika amatayara, iibhetri, iinxalenye ezisecaleni kunye nemigaqo-nkqubo ye-inshorensi kumaxabiso abathengisi.Kwaye i-40% yenzuzo yale nkqubo yonke yenza igalelo elincinci kwiintsapho zabaqhubi beloli ngengozi kwimithombo yemali okanye yezempilo. Ukuze ubomi bakhe bokufa bungapheli phambi koZihlonipho.
Zingaphi iilori eIndiya?
Ngemithombo, ulwazi lufunyenwe ukuba kumyinge we-80 lakh iilori zorhwebo ziqeshwe eIndiya. Kuzo yi-20% kuphela esebenzayo yonke imihla.
Okushiyekile I-30% yeelori linda ixesha elide ukuba inani labo livele kwiinkampani ezilayishayo okanye ezothulelayo.
On 15% ezindleleni, iilori ezitshaywa ngabasemagunyeni zima koohola bendlela ukuze zirhwaphilize.
I-10% yeelori zipakwe ngenxa yokuqhawuka okanye ukungabikho komqhubi.
Kwaye abaseleyo I-25% yeelori balinde umthwalo wokubuyisela kwizixeko ezincinci, izithili okanye iindawo ezikude ezingafikelelekiyo zaseIndiya.
imeko ye abaqhubi beelori imbi kakhulu ngenxa yokungafumani uThutho olulungileyo .
Yintoni isithuthi sokwenziwa ?
Uthutho olungagungqiyo ayifuni igalelo lamandla. Umzekelo we Izithuthi ezingenzi nto Ukusasazwa, ukuhamba kweeamolekyu ukusuka kwindawo yoxinzelelo oluphezulu ukuya kwindawo yoxinzelelo oluphantsi. Iiprotheni zomthwali kunye neeproteni zesiteshi zibandakanyeka ekusasazeni lula.
Kutheni ezoThutho kunye noLungiselelo luxabisa ngokwahlukileyo kuzo zonke iiNkampani?
Kukho izizathu ezininzi ezinzulu zoku, ngenxa yokuba ezi ziphumo bezingalindelekanga zilandelayo zihlala zibonwa njengesiphumo sengqondo esincinci.
Urhulumente akakayilungisi imali yokukhwela iikhilomitha kushishino lwelori.
Imanyano yezothutho ibuthathaka
Akukhange kubekho phuhliso lulindelweyo lwemizi-mveliso okanye i-mandis kuyo yonke indawo.
Ngenxa yobukhapitali, ukongamela kwabantu abambalwa kakhulu kuye kwakhiwe kweli shishini, elilawulwa yimonopoly ngaphandle kwesizathu.
Ezi sadhus, ootata, iinkokheli zopolitiko kunye namazwe angaphandle basebenzisa imali emnyama ukukhuthaza ubungxowankulu kwaye bahluthe ishishini. Kwaye usebenzise iindlela zobundlobongela ukwenza inzuzo. Ezi ndaba zibonwa kumaphepha eendaba .
Ngenxa yokunqongophala kobumbano, ulawulo lwe-bureaucracy lwanda kwaye ubomi babaqhubi baba lusizi. Kwanasemva kokusebenza iiyure ezili-18 ukuya kwezingama-20, umqhubi weklasi akakwazi ukuhlangabezana neemfuno zabo.
Amaxabiso eenqwelo-mafutha kunye nemithombo yoncedo iya ibiza yonke imihla, kodwa amaxabiso okukhwela awanyukanga ukusukela kwiminyaka elishumi edlulileyo kwaye iindleko zonyuke ngaphezulu kwe-80%.
I-Transporter ihlawula i-18% ukuya kwi-28% yerhafu kuzo zonke iindleko kodwa akafumani nzuzo yembuyekezo yeteksi .
Kukho ingxaki yokubuyisela umthwalo ngalo lonke ixesha. Umthwalo obuyayo osuka kwiNqanaba lesi-2 lesixeko kufuneka ulinde iintsuku ezi-3 ukuya kwezili-5. Umthwalo awufumaneki kwezinye iindawo.
Ngenxa yemekobume engakhuselekanga, ukudodobala kwezoqoqosho, urhwaphilizo kunye nokungaziphathi kakuhle kwabantu ngalo lonke ixesha, umqhubi uphantsi kotywala, ngenxa yoko ziya zisanda iingozi.
Ukhuseleko lwentlawulo yomthwalo kunye nokuxhuzulwa ngokupheleleyo ngobuqhetseba
Urhulumente kunye nemigaqo-nkqubo karhulumente iyasilela ukwenza ishishini lethu.
Konke oku kungasentla kuya kuchaphazela amalungiselelo akho kunye neendleko zothutho.
Qaphela :- Kwiminyaka elishumi edlulileyo iindleko zothutho beziyi-5% yemveliso yakho. Okwangoku inyukile ukusuka kwi-8 ukuya kwi-30%
Yintoni umahluko phakathi koThutho v/s Logistics ?
Ezothutho yi UKUTYHUBEKA NGQO KWEEMPAHLA kunye nelogistics yi ULAWULO LOKUTHUTHWA NGAPHAKATHI NAKUPHANDLE KWEEMPAHLA ukusuka kumenzi ukuya esiphelweni ukuya kumsebenzisi wokugqibela….
Ungaliqala njani ishishini lezothutho eIndiya?
I-99% yabathuthi baseIndiya baxinzelelwe ngokwejografi nakwezoqoqosho. Ukuba nawe uyafuna ukwenza kwa eli shishini linye, liyakuqala nge-20 ukuya kwi-50 lakh rupees eliya kuba ivalwe ngelahleko kwiminyaka emi-5. Kodwa kwishishini elingaphambili kunye nelifanelekileyo, wena idinga imali engaphezulu kwe-10 yezigidi, abasebenzi abanezakhono, itekhnoloji ephezulu, i-2 yamashumi eminyaka yamava kunye nolwazi olupheleleyo lwejografi kubalulekile.
Yeyiphi eyona ndlela yothutho yexabiso eliphantsi eIndiya?
Amanzi, umhlaba kunye nomoya, ngokomyinge, zonke ezi zixhobo ziyafumaneka kwilizwe ngalinye ukuze zithuthwe, kodwa ukugcina indawo ekuyiwa kuyo engqondweni, kumiselwa ngokwemeko. Sibonelela ngeendidi ezingama-32 zeenkonzo zothutho ezindleleni eIndiya nakuMazwe aseAsia amaphondo anokuthi angabizi mali kwaye abe luncedo kuwe .
Ulifumana njani iphepha-mvume lokuqhuba eIndiya?
Urhulumente wenze iinzame ezininzi ekufikeleleni ngokulula kwilayisensi yokuqhuba, kodwa kunzima kakhulu ukufumana ilayisenisi ngaphandle kwearhente. Ixabiso layo lokugqibela likwagqitywa yi-arhente. Apho ukuyekelela okufunekayo kwenziwa ngokwemali kwaye ngenxa yoko ulwaphulo-mthetho kunye neengozi zibonakala zikhula ngokuqhubekayo.Nge-NGO yethu entsha, ngumzamo wethu wokubonelela ngelayisenisi yasimahla kubantu abasweleyo ngoqeqesho olulungileyo lweenyanga ezi-6. Ukuze abasweleyo bangaphangeli bafumane ingqesho kwaye uluntu loluntu lufumane abaqhubi abalungileyo nabaphambili. Sithetha nje sikwinqanaba lenkxaso-mali yale projekthi iyonke.
Yeyiphi eyona mpazamo inkulu kwishishini lezothutho?
Ukungahoywa kwejografi kunye nobuchule kwishishini lezothutho, kukholelwa ukuba abanikazi bezithuthi basebenza ngamaxabiso aphantsi nasemva koxanduva lwamatyala, uxanduva kunye neendleko.
Yintoni inombolo yezothutho?
Umthuthi weNdlela + 919408275245
Yeyiphi eyona nkqubo yokuthumela?
Sibuza imibuzo engama-33 kubathengi bethu kwaye sinikezela nge-2 okanye i-3 ngokuxhomekeke kwiimfuno zabo, umlinganiselo webhajethi kunye nomthwalo. Ilori ithunyelwa ukuba ilayishwe kuphela emva kokuthatha iodolo yomsebenzi kunye ne-20% ye-advanced ngokuhambelana nesipho esivunyiweyo. Emva kokulayisha gqibezela onke amaxwebhu. Kwaye uthathe ibhalansi 80% intlawulo. Kwaye yonke imihla yazisa umthengi malunga nenkqubela phambili yomsebenzi wakhe. Emva kokothula kwindawo ekuyiwa kuyo, ingxelo ithathwa kumacala omabini ukulungiselela uphuculo lwexesha elizayo.
Igalelo likarhulumente langoku kunyuso lweshishini laseIndiya?
Iingcali zoshishino ikakhulu zichaza ukuba uRhulumente ufuna ukunyamezela ukunyathela ekuchitheni imali eninzi kumacandelo athile. URhulumente wangoku ugxile kwizinto ezahlukeneyo ezifana nezemfundo, iziseko zophuhliso, ukhathalelo lwempilo, uqhagamshelwano nokunye. Yonke le yimiba ephambili evuselela ukukhula ngokuhla kokukhula koqoqosho. Kukho amakhulu-khulu oosomashishini kwakunye nabaqalayo kumacandelo emveliso abathe baphuculwa ngoqoqosho. Urhulumente uqalise amanyathelo athile okuvuselela uqoqosho ngokukhula okukhulayo. I-Indiya isabela kwimfuno yokwenziwa kwemveliso kunye namanye amacandelo eenkonzo emva koko i-80% ye-GDP iya kuphucuka.
Yintoni icandelo labathengi? Ingaba iklasi yabathengi baseIndiya?
Ukwahlulahlula kwabathengi akukho nto kodwa yinto yokwahlula umthengi kwiqela. Sele kuqhutywa uninzi lwezinto ezihambelana nokuthengisa. Ke, idlala indima ebalulekileyo ekuhlangabezeni umdla jikelele kunye nemikhwa yokuchitha. Ke, kubizwa ngokuba kukuvavanya iindlela ezithile zokulungelelanisa kunye neemfuno zokuthengisa.
Izigidi zabemi baseIndiya banoluhlu olukhulu lodidi olusisiseko. Ikwathathwa njengephezulu ngenxa yoluhlu lwentengiso yaseIndiya. Ibandakanya udidi oluphakathi, olutyebileyo, kunye nomgangatho osezantsi ophakathi. Inexabiso eliphuphumayo lobutyebi kwaye ngamanye amaxesha ibandakanya imeko embi kakhulu. Ukujonga i-database ikwatyhila iklasi enkulu yaseIndiya.
Yintoni ebangele iyantlukwano yejografi eyenza kube nzima kwiinkampani zoshishino zamazwe amaninzi eIndiya?
Ubuzwe, inkcubeko, ubuhlanga, isini kunye nezinye iintlobo zezazisi zimisela indlela abantu abalazi ngayo, abalibona ngayo kunye namava ehlabathi. Abantu abasuka kwiindawo ngeendawo bacinga, baphendule kwaye bafunde ngokwahlukileyo. Kunzima kwiinkampani zoshishino zamazwe amaninzi eIndiya ngelixa zizama ukuqonda abasebenzi bazo. Okona kubaluleke kakhulu, iyantlukwano ngokwejografi iya kukhokelela ekunqongophaleni komanyano phakathi kombutho. Ukuba ibotshelelwe ngokufanelekileyo, iyantlukwano ngokwejografi inokubonelela ngembono ebanzi kunye namacala amaninzi kwi-acumen kunye nobulumko kwiinkampani zoshishino zamazwe amaninzi. Iinkampani zaseIndiya azinangxaki ngakumbi ngorhwebo lwamazwe amaninzi oluhlawulwayo ngokwahlukana kweJografi. Kungenxa yokuba inkqubo ilula kancinane.
Ngaba kukho isithuthi esisebenzayo sorhwebo esikhoyo eIndiya njengoko kulindelekile?
Inguqu e-Indiya iba yinyani ngakumbi norhulumente wangoku uzinzile kwaye utyhala kakhulu ekuhambeni kombane. Itanki likarhulumente lokucinga – i-NITI Aayog ibikhokele kwinguqu yokwandisa indlela yothutho yokukhupha kungabikho nto. Iilori ze-Multi-Axle (MATs) zithathwa njengesithuthi esisebenzayo sorhwebo esifumaneka eIndiya kwaye sisetyenziswa ngokubanzi kunye nothutho lwamashishini. Ezi zithuthi ubukhulu becala zisusela kwiitoni ezingama-26.2 ukuya kwiitoni ezingama-49 zobunzima obugqithisileyo. Ukuthengiswa kwezi zithuthi kuye kwatsiba phakathi kuka-2009 no-2010 ngama-55% ngaphezulu. Isithuthi sokuthengisa iimpahla siphuculwe kakhulu kumgangatho ophakamileyo we-60% yemarike yezithuthi zorhwebo ziphuculwe kakhulu.
Yintoni iyantlukwano kumalungiselelo okanye iindleko zothutho eIndiya?
Icandelo lezothutho laseIndiya likhulu kakhulu kwaye lahlukene. Sele isenza isisombululo esikhulu sokwenza uthutho ezindleleni. Ukuhambisa iimpahla kunye neemveliso, ukuthutha ezindleleni kufuneka kakhulu kwaye kubandakanya izenzo ezilungileyo. Ineziphumo ezininzi kwaye uninzi lwezinto ezithunyelwa ngaphandle zixhomekeke kuthutho olusendleleni. Kwakhona, iindleko zothutho eIndiya ziyafikeleleka kwaye zixhomekeke kubungakanani beshishini. Isebenza kupapasho olwenza umndilili wabemi ixesha leemfuno zezothutho. Ke, yifumane ngokusekwe kwiiyantlukwano kulungiselelo kunye neendleko zothutho zilinganiselwe kumacandelo oshishino.
Yintoni ukuthutha okunzima Ukugqithiswa kwe-ODC ngumsebenzi olula eIndiya?
I-ODC, ngenye indlela ebizwa ngokuba yi-over-dimensional cargo yongezwa ngokupheleleyo ngaphandle kwedekhi yezithuthi zokutshintsha iimpahla ezinobungakanani obungaphezulu. Zombini ubude kunye nokuphakama kwempahla zikhulu kunezithuthi eziqhelekileyo. Le mithwalo inzima isetyenziswa kuwo omabini amacandelo asekhaya kunye nezorhwebo. Uthutho lwe-ODC eIndiya lunokunceda abantu batshintshe iimpahla zabo ezinzima ukusuka kwindawo enye ukuya kwenye ngokukhawuleza. Kungenxa yokuba ezi nqwelo-mafutha zixhotyiswe kakuhle ngezixhobo ezininzi zale mihla. Bayakwazi ukuthutha iimpahla ezinobunzima obunzima kumgama omde. Umnikezeli wenkonzo yezothutho unamava aneleyo kweli candelo, ngoko ke iqela lenza inkqubo yokuthutha iyonke ingabi nangxaki.
Zingaphi iiMpahla ezilungileyo zeCarrier abenzi belori zentengiso abadumileyo ehlabathini?
Kukho abavelisi abaninzi basekhaya okanye bengingqi okanye iiyunithi zendibano ezenza izithuthi zorhwebo phantsi kwamagama amaninzi. Kodwa siya kwabelana nawe ngoluhlu lwezona zinto zidumileyo eziphezulu, ezisebenzayo kunye nomgangatho oPhezulu onzima wabenzi belori.
UDaimler AG (Mercedes-Benz)
Mangaphi amazwe eIndiya?
I-Indiya inayo I29. Kukho kwakhona 7 imimandla yomanyano .Kodwa kwimbono yokulula kunye nempumelelo, sijonga kubo ngokwengingqi elandelayo.
South India :- Andhra Pradesh ,Karnataka , Kerala ,Tamil Nadu ,Telangana , Pondicherry (okanye iPuducherry),
Intshona yeIndiya :- Maharashtra , Goa ,Gujarat , Dadra no Nagar Haveli , UDaman kunye noDiu ,Rajasthan
EMpuma India (KuMntla-mpuma weIndiya):- Arunachal Pradesh , Assam , Meghalaya , Manipur , Mizoram , Sikkim , Tripura , Nagaland
EMantla eIndiya :- Bihar , Chhattisgarh , Haryana , Chandigarh , Himachal Pradesh , Jharkhand , Madhya Pradesh
Iceland :- UAndaman noNicobar , Lakshadweep
Zingaphi iilwimi eIndiya ?
EIndiya, sineelwimi ezingaphezu kwe-1600+ ezilulwimi lweenkobe lwabantu. Kwiingingqi ezahlukeneyo zelizwe lethu iilwimi ezahlukeneyo zithethwa ngabantu baloo mmandla.
Zingaphi iibhulorho eIndiya ?
200+ ibhulorho enkulu eIndiya kodwa ngenxa yezinga lorhwaphilizo ayikho imeko entle.
Zingaphi iilali zaseIndiya ?
Iilali ezingama-6,64,369 XNUMX XNUMX zaseIndiya .
Mangaphi amazwe kunye nemimandla yomanyano eIndiya?
I-Indiya inayo I29. Kukho kwakhona 7 imimandla yomanyano.
Yintoni iGDP yaseIndiya?
GDP kumaxabiso angoku ngo-2020-21 kuqikelelwa kwi-Rs 197.46 lakh crore ngokuchasene noqikelelo lokuqala oluhlaziyiweyo lwe-Rs 203.51 lakh crore ngo-2019-20, ebonisa ukwehla -3.0% Ipesenti xa kuthelekiswa ne-7.8 yepesenti yokukhula ngo-2019-20, yatsho inkonzo.
Liliphi ixesha eIndiya?
UTC/GMT +5:30 iiyure
Yeyiphi ilori engcono?
Baninzi abavelisi belori eIndiya, abamkela ukuqaliswa kwenkqubo entsha yonke imihla. Kodwa nangoku ngokophando koohola bendlela
Iilori ze-TATA :-Ezona zithengiswa ngokutsha, uLondolozo, kunye nokonga amafutha
Ashok Leyland :- Yeyona ingcono kwi-Hill Side Movement .
I-Eicher:-Ubuchule obuphezulu beFuel, iNkqubo eGqwesileyo yokuQhutywa, ikhululekile kunye nokuqhuba kakuhle.
Iilori zeMahindra :- zidumile kwicandelo lezeMigodi
ISUZU :- ICandelo le-LCV Ligqwesileyo kumadoda amaNcinci aQhelekileyo kuShishino lwasekhaya.
Zonke Iindidi zeelori kunye neMbali yelori:- Nceda ucofe
Zeziphi iindlela ezahlukeneyo zothutho?
KuLwazi lwam iindlela ezahlukeneyo kunye neendlela zothutho zi ezothutho zomoya, zamanzi, nezomhlaba, ebandakanya iiRail okanye ii-railways, iindlela ezizayo iindlela zentambo kunye neenkqubo zeedrones
Yintoni ezothutho nonxibelelwano ?
Ezothutho zinendima eyimfuneko kumsebenzi wezoqoqosho. Ngaphandle kokufikelela ngokwasemzimbeni kwizibonelelo kunye neemarike, ukukhula koqoqosho nophuhliso ibingekhe ibekho. Inkqubo yezothutho esebenzayo, ke ngoko, ingundoqo ekwenzeni uphuhliso loqoqosho oluzinzileyo.
Ithini i-avareji yeendleko zothutho lolungiselelo nothutho?
Uthutho lweMpahla ngokubanzi I-15 yeerandi ngeToni nganye ngekhilomitha
Ukugqithiswa kweMpahla yoThutho I-25 yeerandi ngeToni ngeKilomitha nganye + Iindleko zonke zeeMvume
Imigaqo kunye neMiqathango iyasebenza
Ngubani owaphehlelela uthutho lwe-decarbonising eIndiya?
IForam yezoThutho yamazwe ngamazwe (i-ITF) kunye neZiko leSizwe loTshintsho eIndiya (i-NITI Aayog), ngokudibeneyo baqalise iprojekthi ye-Decarbonising Transport kwiprojekthi yezoQoqosho olusakhulayo (DTEE) eIndiya.
Indlela yokuthutha izilwanyana zasekhaya eIndiya?
Isilwanyana sasekhaya sisilwanyana sasekhaya. Kwilizwe elisaphuhlayo elifana neIndiya, apho inkonzo yothutho lukawonke-wonke kunye nempahla ingekho kakuhle, kunzima ukufumana umthuthi wesilwanyana sasekhaya. Sikunceda ukuba ufumane oyena mthengisi ubalaseleyo ngembono esebenzayo.
Ungalifumana njani iphepha-mvume lezothutho eIndiya?
Ukubhaliswa kweShishini leziThuthi eziNcinane ukusuka kwiphothali ye-MSME kunye nenombolo yoBhaliso esuka kwi-GST portal ifumaneka simahla kumthuthi omtsha ngeveki. Ukuba awukwazi, ngoko ke GRAHAK SUVIDHA KENDRA iya kuxabisa i-R500. Ngokomndilili, umsebenzi wakho uya kwenziwa de ube lishishini le-20 lakhs. Emva kweli phepha iindleko ziya kunyuka ngomvuzo wakho kunye neshishini. Ukuba kukho imfuneko, ubhaliso lwengingqi okanye lwengingqi kufuneka lwenziwe.
Yintoni isithuthi ?
Inkqubo eyenzeka ekudlulisweni kwabantu okanye iimpahla ibizwa ngokuba yi-transport.Injongo yokufuduka okanye yothutho yi-avareji inzuzo ngeendlela ezininzi.Ikakhulukazi iindlela zayo ezintathu ezisebenzayo ezisebenzayo zithutho lwamanzi, uthutho lomoya, uthutho lwendlela.Okwangoku, iindlela ezintsha ezifana noololiwe, iiropeways, iidrones nazo ziyasebenza kwaye ziphantsi kophuhliso.
Zingaphi iintlobo zezithuthi ?
Ikakhulu iindlela zayo ezintathu ezisebenzayo ezisebenzayo zi uthutho lwamanzi, ezothutho ngenqwelomoya, ezothutho ezindleleni.Ngoku, iindlela ezintsha ezifana noololiwe, iiropeways, iidrones nazo ziyasebenza kwaye ziphantsi kophuhliso.sinakho iintlobo ezingama-32 zothutho olunzima lweenkonzo zothutho lwendlela.
Ngubani umphathiswa wezothutho eIndiya?
EZINTATHU NITIN JAIRAM GADKARI
UMPHATHISWA WEZOTHUTHO ENDLELA EZINKULU NOTHUTHO
"Izothutho Bhawan" 1, Sansad Marg, New Delhi - 110001
Umnxeba: + 91 11-23711252, 23710121
Iyintoni intsingiselo kunye nokusetyenziswa kwenkampani okanye ishishini ngokwenyani?
Inkampani okanye ishishini, enyanisweni, liqumrhu elibandakanya ishishini. Inkampani inokusekwa ngeendlela ezininzi. Inkampani inokuba liqumrhu, i-prietorship eyodwa okanye phantsi kwentsebenziswano. Ngokusekwe kwinkampani eyahlukileyo osebenza nayo, inokuba yeyomntu omnye okanye iqela labantu. Inkampani inokwakheka kakuhle phantsi kweemeko ezininzi. Ubutyala luhlobo olubalulekileyo lwenkampani ecingelwa ngokukodwa. Inkampani okanye umzi-mveliso eIndiya unokukhula okukhulu ngophuculo lwetekhnoloji yale mihla kunye nezibonelelo zothutho kulo lonke ilizwe.
Ingaba umdla woluntu unawuphi umphumo kushishino okanye kushishino?
Ukukhula kwemizi-mveliso kunempembelelo enkulu kuluntu kwaye abantu kufuneka bajonge phambili kwiinguqu ezithile kwilizwe. Ngokusekwe kumdla woluntu kushishino, iingeniso kunye nengqesho zinyukela phezulu. Yanda ekukhuleni kwabantu ezidolophini kwaye abantu bafudukela kwiziko lasedolophini kuphuhliso lokukhangela. Ezothutho ezindleleni, uphuhliso oluthile luye lwamiselwa ukunceda uluntu. Uphuhliso lwezoqoqosho nalo luthabathe inguqu kwezoshishino. Izise utshintsho olubalulekileyo lwentlalo phakathi komdla woluntu kushishino. Inguquko inyuse ukuba ithathele ingqalelo utshintsho olubalulekileyo kwezothutho ezindleleni kumacala oshishino. Abasebenzi bayahlawulwa kwaye bathathe inzuzo kwimveliso yobuninzi bempahla.
Yintoni Logistic kwaye yintoni esebenzayo?
Ulungelelwaniso lusetyenziswa ngokubanzi ukubhekisa kwinkqubo yokuhambisa izixhobo ezibandakanya izixhobo, iimveliso, imathiriyeli, kunye noluhlu lwempahla ukusuka kwindawo enye ukuya kwelandelayo kwindawo ekujoliswe kuyo. Eli gama lisetyenziswa kwiinkqubo ezininzi. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeenkonzo zolungiselelo ezikhoyo kodwa uthutho ezindleleni lufumana udumo olungakumbi phakathi kweengcali zoshishino. Kungenxa yokuba ukuba iimveliso zoshishino okanye izinto eziphathekayo azikwazi ukufikelela kubathengi, ziya kusilela. Yindawo efanelekileyo xa ezothutho ezindleleni zinendima ebalulekileyo. Ikwachaphazela neminye imiba emininzi yamashishini. Ukuba iimveliso zithunyelwa kubathengi bakho ngexesha, kuya kwandisa inzuzo yenkampani.
Zingaphi iintlobo zothutho ezisetyenziswa kakhulu eIndiya?
Ngokukhula ngokukhawuleza kweedolophu eIndiya, ukukhula koQoqosho kweli lizwe nako kuye kwaphucuka. Inkqubo yezothutho ubukhulu becala iphuculwe yaziindlela ezahlukileyo ezifana nezothutho ezindleleni, oololiwe, izithuthi zamanzi angaphakathi elizweni, izikhululo zeenqwelo moya, iinqwelomoya, iinqanawa eziselunxwemeni nezinye ezininzi. Iindlela zezona ndlela zothutho zithwele malunga nama-85% ezithuthi zizonke ezenziwe elizweni. I-Indiya ineemoto ezibhalisiweyo ezimalunga ne-191.7 yezigidi kwaye iNgxaki yokuKhula koNyaka kwiZithuthi eziBhalisiweyo zizonke e-Indiya ziphuculwe ukuya kuma-94%. Ngokunyuka kwenani lezithuthi ezindleleni, kukwavula indlela yophuhliso loshishino.
Zeziphi izinto ezingeloncedo kwishishini lezothutho?
Nantsi intsilelo yeshishini lezothutho ngolu hlobo lulandelayo:
Iingozi zarhoqo Ukuthuthwa kwendlela eIndiya kuyingozi. Amanyathelo okhuseleko ayimfuneko awazange enziwe ngokuchasene neengozi zendlela.
Indlela enganelanga Iindlela ezininzi eIndiya azanelanga kwaye zikwafumaneka zikwimo embi. Kukho nje iikhilomitha ezingama-34 ubude beendlela kwindawo nganye ye-100 sq.km.
IiRhafu ezinzima Yenye into engalunganga kwishishini lezothutho ezindleleni. Umthwalo werhafu ngesithuthi ngasinye kweli lizwe yi-Rs. 3500.
Ukulungiswa kakubi kweendlela Iindlela zaseIndiya azigcinwanga kakuhle. Kukho kuphela i-0.1% yomvuzo welizwe otyalwe kulungiso lwendlela eIndiya.
Ukunyuka kweendleko zedizili nepetroli Isixa esisebenzayo sothutho ezindleleni sikhula ngokuqhubekayo.
Ayifanelekanga kwimpahla eninziAyifanelekanga kwimpahla enzima
Zeziphi iingxaki ezinkulu zeshishini eIndiya?
Ukususela kwixesha lamandulo amaIndiya ebekhuthaza uxolo. Ishishini liphucuke kakhulu ukuya kwinqanaba eliphezulu kodwa kukwakho ezinye iingxaki uninzi lweshishini elijongene nazo. Enoba inxulumene norhulumente, ulwaphulo-mthetho 'oothixo', imeko yeendlela, urhwaphilizo, okanye nayiphi na enye, ishishini liyachaphazeleka kwiimeko ezithile. Urhwaphilizo ngoyena bhubhani uxhaphake kakhulu eIndiya ngoko ke kubalulekile ukuba uphathwe ngobulumko nangokukhawuleza. Nangona ilizwe lethu lidinga utshintsho oluninzi ngoku apha ngezantsi zezinye zezinto ezibalulekileyo ekufuneka sizithathele ingqalelo ukuze sizilungise ngokukhawuleza.
– Ukungakwazi ukufunda nokubhala
– Inkqubo yezemfundo
– Ucoceko olusisiseko
– Inkqubo yezempilo
– Ukhuseleko lwabasetyhini
– Iziseko zophuhliso
Yintoni kwaye bangaphi abawela kwimpembelelo embi yeshishini lenkonzo yezothutho embi?
Ngenxa yokunqongophala kweenkonzo zothutho, amashishini amaninzi achaphazeleka kakhulu. Ukuhanjiswa kwempahla ukuya kwindawo echaphazelekayo ngenxa yezothutho ezindleleni ezimbi. Ibandakanya inani elikhulu lezinto ekufuneka uzigcine engqondweni kwaye imveliso iya ngezantsi. Ukulawula le meko, ukungahambi kakuhle kwezithuthi kufuneka koyiswe ngokukhawuleza. Yandisa iindlela ezaneleyo kwiindawo ezisemaphandleni zithande ukwandisa imveliso. Kumalungiselelo ezolimo kunye neemarike, uthutho ezindleleni luyimfuneko. Ke, ukuhamba kakubi kufuneka kusonjululwe ngokuthatha imilinganiselo efanelekileyo. Ingakumbi kwimimandla yasemaphandleni, ukuthutha kubalulekile ukuphumeza izinto ezininzi kakuhle. Ke, urhulumente kufuneka athathe amanyathelo afanelekileyo ukunqanda le ngcamango igwenxa kwaye enze okona kulungileyo ukukhuthaza ezothutho ezindleleni.
Umgaqo-nkqubo karhulumente waseIndiya ufanele ukwenza ishishini?
Kutshanje, urhulumente waseIndiya okhokelwa nguNarendra Modi ugxile ngakumbi kwihlabathi elibanzi lenani elingapheliyo labaqalo abasakhulayo. Ukufezekisa oku, urhulumente waseIndiya udala amathuba amatsha kunye neenkqubo. Banceda iinkampani ekukhuliseni nasekuveliseni izinto ezintsha. Maninzi amanyathelo athatyathwe ngurhulumente waseIndiya ukuxhasa ishishini elitsha. Ikwajolise ekukhuthazeni impucuko yokuyila phakathi kolutsha lwaseIndiya. Ngenzuzo ekhethekileyo kunye nenkulu yezibalo, iIndiya inokunyusa kwaye iphucule ishishini lomntu ngamnye kwaye yenze imisebenzi ukuze kuxhamle esi sizwe kunye nehlabathi. Inyathelo ngalinye lithathwa ukwenza ukuba ilizwe liphumelele kwaye likhule.
UMphathiswa wezoThutho eziNdleleni
Uhola wendlela kaZwelonke
Ukujongwa kweNgcaciso zeMoto
I-ABCC India Projects Cargo Corporation
I-India's 1st Heavy Haulage Trucks Aggregator
Umcebisi weProjekthi uHawuli nzima
INkxaso yoLungiselelo lokuPhathwa kweMathiriyeli kunye noGcino
Inkxaso yoMthengi:- +919408275245
Izowuni yeXesha laseIndiya :- 8AM ukuya 8PM
Ukucaca kweshishini, intsebenziswano enobuhlobo kunye nolungelelwaniso, ukusebenza kakuhle kakhulu, isikhokelo esifanelekileyo kunye nesiphelo esiphezulu yinkcazo ye-ABCC INDIA yeProjekthi yeCargo Corporation. Indiya, Nepal, Bhutan, Bangladesh 686 izithili 6,49,481 ibeka rhoqo, elula, efikelelekayo, efikelelekayo, enokuthenjwa, ebalaseleyo, ephethe ngokufanelekileyo iinkonzo zezoQoqosho, indawo yethu yobuchwephesha kunye nesidima kuwo onke amazwe. Sinazo zonke iinzame zokwandisa ukwenziwa kwezinto elubala nokubalula kweshishini ngokubonelela ngeenkonzo eziqhubekayo, ezingakhethi buso, ezilula, ezilula nezithembekileyo kuye wonke umntu kwindawo nganye ngokubhekiselele kwiminqweno kasomashishini. Ngezona zigqibo zingcono ngokudibanisa iphondo ngalinye neyona nqobo ilungileyo kunye nesiseko semithetho-siseko, imbono yoshishino lwesizwe kunye nesidima saqhubeka kwindlela yenkqubela phambili. Esingenakufumana ngalo igama lesizwe elisaphuhlayo kodwa ilizwe elisaphuhlayo. Igalelo labaxumi kunye nokuthembana kubaluleke ngaphezu kokukwazi kweenkampani ukuvelisa iziphumo ezilungileyo, ukuthembela kwabathengi kunye nokwaneliseka yeyona mpumelelo inkulu yombutho wethu.
Biza iqhosha ngoku